hoo!haa!! – Page 40 –
ATỌRAPỤLA NDI INYOM BIAFRA EJI EJI
Atọrapụla mmadụ iri na isii bụ ụmụ nwanyị ndi Indigenous People of Biafra, IPOB, bụ ndi akpụpụrụ ụlọ ikpe maaji dị n’Owere, na steeti Imo tata. Onweghṅ ihe ọzọ a gwara ha ka ha mee belu sọ ha lawara onwe ha. Ntọrapụ ha kpaliri mụọ ọñụ n’ime ndi otu haRead More →
ANAMBARA: ORIAKỤ OBIANỌ AGBAPỤTALA NNE EJIMA-ISE N’ỤLỌ ỌGWỤ
Nwunye aka na-achị steeti Anambara bụ Oriakụ Ebelechukwu Obianọ, ana-etu, Osodieme, gara otu ụlọ-ọgwụ ana-akpọ ‘Life International Hospital’ dị n’Ọka, ụnyahụ bụ Wenesdee, bụ ebe ọ nọrọ kwụọrọ otu nwanyi mụrụ ụmụaka ise n’otu nje, ego dị otu nde naira, na puku naira iri isii na ụma, iji gbapụta yaRead More →
ÒTÙ NDI IGBO AKPỌỌLA OKU, KA-AKPỌỌ ÓTÚ ÒTÙ NDI ALAKỤBA, “NDI OMEKOME”
Òtù ndi Igbo akpọrọ South East Renewal Group, SERG n’aha nkenke, akpọkuela gọọmenti etiti ka o kwue hoohaa, na ndi otu ụka Alakuba, ana-akpọ Islamic Movement of Nigeria IMN, bụ otu omekome. Otu SERG kwuru na ọ dị ọtụtụ ihe ndi IMN na-eme, ha chọpụtara na ha na-enweta nkwado gọọmentiRead More →
AKPỌCHIELA ỤMỤ NWANYỊ NDI BIAFRA N’ỤLỌ NGA DỊ N’OWERE
ỤÓtú ụlọ ikpe maaji dị n’Owere, nke ọbụ S. K. Durumba nọ n’isi oche, anọrọla n’ụbọchị Mọndee gara aga kpọchie ụmụ nwanyị ndi nke na-achọ nnwere onwe Biafra; dị otu naari na iri na abụọ n’ọnụ ọgụgụ, n’ụlọ mkpọrọ dị n’Owere bụ isi obodo steeti Imo. Ka nke a na-eme,Read More →
AKA AKPARALA ONYE ISI NDI BIAFRA ZIONISTS FEDERATION
Ndi uwe ojii nakwa ndi DSS ejikọọla aka ọnụ kpụrụ onye ndu otu Biafra Zionist Federation BZF n’aha ịchafụ, bụ Bejamin Ọnwụka. Nke a bụ maka ihi mbọ ha na-agba iguzobe mba Biafra ma makwụnye ọkọlọtọ ya n’obi gọọmenti dị n’Enugwu. Ọbụ n’okporo ụzọ Bisalla Road, nke dị n’Independence LayoutRead More →
OKE MMIRI OZIZO ASỤỌLA NDI ALAKUBA GARA NJEM NSỌ AKWỤ
Na mgbede ụnyahụ bụ Ụka, oke ikuku na nnukwu mmiri ozizo zutere ọtụtụ ndi Alakụba gara njem nsọ, mgbe ha siri Mina gawa ịrị ugwu Arafat. Akụkụ ugwu Arafat bụ ebe ndi Alakuba gara njem nsọ na mba Saudi Arabi na-anọ kpee ekpere pụrụ iche na njem nsọ ha. OkeRead More →
AGBAGBUKWALA ỤKỌCHUKWU NDI KATỌLIK N’ABUJA.
Ndi ana-enyo enyo dịka ndi oji egbe eje, agbagbuela otu ụkọchukwu ndi ụka Katọlik na Gwagwalada dị n’Abuja. Aha ya bụ Rev. Fr. Maikel Akawu Ọbụ n’ụlọ ahia ukwu, (super market), n’ebe elekere asatọ nke abalị, ka ha wakporo ụlọ ahịa ahụ ma gbagbue ụkọchukwu a, n’ụbọchị Satọdee gara aga.Read More →
ỤMỤ AHỤHỤ/ARỤRỤ ( INSECTS)
ANA-ACHỌ NDI ỌRỤ “BANK” MMADỤ ITOLU ACHỌ MAKA IZU EGO N’ỌBA EGO.
Ndi uwe ojii ekwuela na ha na-achọ mmadụ itolu bụ ndi ụlọ ọrụ ọba ego achọ, maka ikpa agwa dịka Judas. Nke a mere n’otu n’ime ụlọ nchekwa ego ọgbara ọhụrụ. Ndi a bụ ndi ekwuru na ha bụ nkịta tara ọkpkpụ anyawara ha n’olu site na iburu ego ndiRead More →
IWOBI ABANYEWO NOLLYWOOD
Alex Chuka Iwobi nwa-afọ Naịjiriya na-agbara egwu bọl Arsenal ihu abanyewo Nollywood site na isonye n’ejije nke a kpọrọ “INPADISU”. hoo!haa!! chọpụtara na Iwobi wepụtara ohere mgbe ọ nọ ezumike were sonye na ya bụ ejije nke e mebere na Surulere, Legọsị. Iwobi bụ onye mbuụzọ na ya bụ ejijeRead More →
ỌDACHỊ! ỌKỤ AGBAGBUWO NDI NILE NỌ N’ỤGBỌALA NDI NJEM N’ỤZỌ ABỤJA
Oke Ọdachi dapụtara ụnyahụ mgbe ụgbọala Peace Mass si Abụja gbara ọkụ pịa pịa mgbe o nwere ihe mberede n’ụzọ awara awara si Abuja aga Lokoja. Site n’ozi hoo!haa!! nwetara, ya bụ ụgbọala ndi njem chọrọ ịgafe ogologo ụgbọala “911” bu nama mana onye ọkwọ ụgbọala nya ya bụ “trela”Read More →
NDI GANA ASỊLA NDIGBO,”KWARA LAA!”
Kemgbe Gọọmentị mba Gana wepụtara iwu machibidoro ndi mba ọzọ ịtụ mgbere ahịa,ụjọ jizi ndi Igbo bi na Gana. N’agbanyeghị na iwu a kwesịrị imetụta ndi mba ọzọ nile,o doziri anya na ọ bụ sọọsọ ndi Igbo, ọkacha ndi na-agba mgbere akụkụ ahụ ụgbọala ka ha buzi n’obi. NaRead More →
AGA-ENWE EZUMIKE NDI ỌRỤ MAKA ORIRI NDI ỤKA ALAKỤBA NA TUUSDEE NAKWA WENESDEE
Gọọmenti etiti eweputala ụbọchị Tuusdee, abalị iri abụọ na otu, nakwa Wenesdee abalị iri abụọ na abụọ nke ọnwa Ọgọọst anyị nọ n’ime ya dịka ụbọchị ezumike ndi ọrụ n’ala anyị niile. Nke a bụ maka oriri ndi ụka Alakụba akpọrọ ‘Eid-el-Kabir’ eji echeta mgbe Ebraham ji nwa ya bụRead More →
NWA NNE GBURU NWA NNE YA N’IHI EGO NLEKỌTA ADỊGHỊ
Ndi uwe ojii steeti Enugwu na-ama imi n’ala ugbu a, ịmara ka mmiri siri baa n’opi ụgbọgọrọ n’ogbugbu egburu otu nwa-amadịṅ aha ya bụ Chizọba Ogbonna Izuchukwu. Ọ bụ nwa nne ya nwoke bụ Rafel Izuchukwu, nke okpuru ọchchị ime obodo mgbago ugwu Igbo-Eze na steeti Enugwu gburu ya. N’ụbọchịRead More →
Mma (Beauty)/ Mma ( Knife/ matchet)
RAG DAY:Ụbọchị Nkịrịnka Uwe
RAG DAY, ọ pụtara gịnị? Kemgbe izu ụka a, ụmụakwụkwọ nọgasị na mahadum di n’Enugwu dịka IMT na ESCET yi nkịrịnka uwe na-agagharị, na-arịọ ego. Ha sị na ọ bụ RAG DAY. Ụfọdụ sị na Rag day bụ ụbọchị ụmụakwụkwọ mahadum na-ewepụta kwa afọ iji rịọta ego a ga-eji nyereRead More →
NDI NA-ACHỌ BIAFRA CHERENỤ OGE CHINEKE! – Pastọ Ọnụoha
Òtù onye ozi Chineke bụ Pastọ Olisadebelum Ọnụoha nke ụlọ ụka “Jehovah’s World Ministerial Outreach’, agwala ndi IPOB, Ọhaneze Ndigbo nakwa MASSOB ka ha kpezie onwe ha. O kwuru na mgbe aga-eji enweta mba Biafra abụghị ugbu a. Mgbe ọ na-agwa ndi nta akụkọ okwu n’Asaba nke steeti Delta, PastọRead More →
AKA AKPARALA MMADỤ ASAA NA-ALA ỤTỤ N’ỤZỌ EZIGHỊ EZI NA STEETI ANAMBARA
N’Amansii di n’Ọka, na steeti Anambara, ka aka ndi nche obodo kpara mmadụ asaa n’ụzọ ochie si Enugwu gawa Ọnịcha, ebe ha kwuchiri ụzọ ma na-ala ndi ọkwọ ụgbọala gwongworo ego n’ụzọ akwụghị ọtọ. Ọbụ site na igba mbọ ndi minisrị steeti ahụ na-ahụ maka azụmahịa na-agba, ịkwụsị ndi jiRead More →